I-30,000 yeetoni zemveliso yemveliso yesichumiso-YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Umgca wemveliso yonyaka yeetoni ezingama-30,000 zesichumisi esidityanisiweyo yindibaniselwano yezixhobo eziphambili. Iindleko eziphantsi zokuvelisa kunye nokusebenza okuphezulu kwemveliso. Imveliso yemveliso yesichumiso ingasetyenziselwa i-granulation yezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto. Okokugqibela, izichumisi ezihlanganisiweyo ezinee-concentrations ezahlukeneyo kunye neefomula zinokulungiswa ngokweemfuno zokwenyani, zizalise ngokufanelekileyo izondlo ezifunekayo kwizityalo, kwaye zisombulule ukungqubana phakathi kwemfuno yesityalo kunye nonikezelo lomhlaba.
Kwiminyaka yakutshanje, urhulumente uqulunqe kwaye wakhupha uthotho lwemigaqo-nkqubo ekhethekileyo yokuxhasa ukukhula kwemveliso yezichumiso eziphilayo. Okukhona okukhona ibango lokutya okungafunekiyo liya lisiba ninzi, kokukhona kukho imfuno engakumbi. Ukonyusa ukusetyenziswa kwesichumiso sendalo akunakuphela kuphela ukunciphisa ukusetyenziswa kwezichumisi zemichiza, kodwa kunye nokuphucula umgangatho wezityalo kunye nokhuphiswano kwintengiso, kwaye kubaluleke kakhulu kuthintelo nolawulo lokungcoliseka komthombo wezolimo non-point kunye nokukhuthaza ubonelelo lwezolimo- uhlengahlengiso kwicala lolwakhiwo. Ngeli xesha, amashishini ezolimo zasemanzini sele eyinto yokwenza imikhwa yezichumiso evela kwindalo, ayifuni nje imigaqo-nkqubo yokhuselo lokusingqongileyo, kodwa ikwafuna amanqaku amatsha enzuzo yophuhliso oluzinzileyo kwixa elizayo.
Umthamo wemveliso yemigca emincinci yemveliso yezichumiso zendalo iyahluka ukusuka kwiikhilogram ezingama-500 ukuya kwitoni enye ngeyure.
Izinto zokwenza imveliso ziyafumaneka kwimveliso yezichumiso eziphilayo
Izinto zokwenza imveliso yemveliso yezichumiso zibandakanya i-urea, i-ammonium chloride, i-ammonium sulfate, i-ammonia engamanzi, i-ammonium monophosphate, i-diammonium phosphate, i-potassium chloride, i-potassium sulphate, kubandakanya udongwe kunye nezinye izinto ezizalisayo.
1) Izichumisi zeNitrogen: i-ammonium chloride, i-ammonium sulfate, i-ammonium thio, i-urea, i-calcium nitrate, njl.
2) izichumisi ze potassium: i-potassium sulfate, ingca kunye nothuthu, njl.
3) Izichumisi ze-Phosphorus: i-calcium perphosphate, i-calcium perphosphate enzima, i-calcium magnesium kunye ne-phosphate fertilizer, i-phosphate ore powder, njl.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo wemveliso yezixhobo zokuchumisa, sinika abathengi izixhobo zemveliso kunye nezona zisombululo zifanelekileyo kwiimfuno zamandla ahlukeneyo emveliso ezinje ngeetoni ezingama-10,000 ngonyaka ukuya kwiitoni ezingama-200,000 ngonyaka.
1. Izinto eziluhlaza zilungelelaniswa ngokubanzi kwaye zilungele i-granulation yesichumisi esimbaxa, amayeza, ishishini lamachiza, ukutya kunye nezinye izinto, kunye nenqanaba lemveliso yegranulation iphezulu.
2. Umngcipheko wemveliso unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zoxinaniso, kubandakanya isichumiso esisebenza ngezinto eziphilayo, isichumiso esingaphiliyo, isichumiso sebhayoloji, isichumiso esinamandla, njl.njl.
3. Ixabiso eliphantsi, inkonzo ebalaseleyo. Umzi mveliso wethu uvelisa kwaye uthengise uwedwa njengomthengisi othe ngqo ukubonelela ngeyona nzuzo iphezulu yabathengi ngexabiso elifanelekileyo. Ukongeza, ukuba abathengi baneengxaki zobuchwephesha okanye imibuzo yendibano, banokunxibelelana nathi ngexesha.
4. Isichumisi esidityanisiweyo esiveliswe kulayini wokuvelisa sinomthamo omncinci wokufunxa ukufuma, kulula ukusigcina, kwaye sikulungele ngakumbi ukusetyenziswa koomatshini.
5. Yonke imveliso yemveliso yesichumisi iqokelele iminyaka emininzi yamava obuchwephesha kunye namandla emveliso. Lo ngumatshini wokuvelisa isichumisi osebenzayo kwaye uphantsi kwamandla ombane ohlaziyiweyo, olungisiweyo kunye noyilo, ukusombulula ngempumelelo iingxaki zokusebenza kakuhle kunye neendleko eziphezulu ekhaya nakumazwe aphesheya.
Inkqubo yokuhamba komgca wokuvelisa isichumiso somdibaniso ungahlulwa phakathi: izinto ezingavuthiweyo, ukuxuba, igranulation, ukomisa, ukupholisa, ukwahlula kwamasuntswana, ukugqiba ukugqiba, kunye nokupakishwa kokugqibela okugqityiweyo.
1. Izinto ezingavuthiweyo:
Ngokwemfuno yentengiso kunye neziphumo zokumiselwa komhlaba, i-urea, i-ammonium nitrate, i-ammonium chloride, i-ammonium thiophosphate, i-ammonium phosphate, i-diammonium phosphate, i-calcium enzima, i-potassium chloride (i-potassium sulphate) kunye nezinye izinto ezisasazwayo zisasazwa kwinxalenye ethile. Izongezo kunye nokulandelela izinto zisetyenziswa njengezithako kwinxalenye ethile ngezikali zebhanti. Ngokomyinge wefomyula, zonke izinto zokwenza izinto ezingafunekiyo zihamba ngokulinganayo ukusuka kumabhanti ukuya kubxube, inkqubo ebizwa ngokuba ziipremixes. Iqinisekisa ukuchaneka kokuqulunqwa kunye nokuqonda izithako ezifanelekileyo kunye eziqhubekayo nezisebenzayo.
2. Izinto ezixutyiweyo ezixutyiweyo:
Umxhubi oxwesileyo yinxalenye ebalulekileyo yemveliso. Inceda izinto ezingumxube zixubeke ngokupheleleyo kwaye ibeke isiseko sokusebenza ngokukuko kunye nomgangatho ophezulu wesichumiso segranular. Ndivelisa umxube we-axis othe tyaba kunye nomxhubi oxwesileyo oxwesileyo onokukhetha kuwo.
I-Granulation lelona candelo lililo lomgca wokuvelisa isichumisi. Ukukhetha i-granulator kubaluleke kakhulu. Umzi-mveliso wethu uvelisa i-disk granulator, i-drum granulator, i-roller extruder okanye i-granulator granulator. Kule layini yemveliso yezichumiso edityanisiweyo, sikhetha iigrafu ezijikelezayo zedrama. Emva kokuba izinto zixutywe ngokulinganayo, ibhanti yokuhambisa ithunyelwa kumatshini ojikelezayo wegubu lokugqiba ukugqiba.
Emva kokupholisa, izinto ezingumgubo zihlala kwimveliso egqityiweyo. Onke amasuntswana acocekileyo kwaye amakhulu anokuvavanywa ngaphandle ngesixhobo sethu sokugaya. Umgubo ocoliweyo ohanjisiweyo uhanjiswa ususa kwibhande lokuhambisa ukuya kwi-blender ukuyivusa kwakhona impahla eluhlaza ukwenza i-granulation; Ngelixa amasuntswana amakhulu angahlangabezaniyo nomgangatho wamasuntswana efuna ukuhanjiswa ukuze atyunyuzwe sisityumzi sityathanga phambi kwegranulation. Imveliso egqityiweyo iya kusiwa kumatshini wokudibanisa isichumisi. Oku kwenza umjikelo opheleleyo wemveliso.
Le nkqubo yamkela umatshini wokupakisha wobungakanani ozenzekelayo. Lo matshini ubunjwe ngumatshini wokulinganisa ngokuzenzekelayo, inkqubo yokuhambisa, umatshini wokutywina, njl. Unako nokuqwalasela ii-hoppers ngokweemfuno zabathengi. Iyakuqonda ukupakishwa kobungakanani bezinto ezininzi ezinje ngesichumiso somgquba kunye nesichumisi esimbaxa, kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwimizi-mveliso yokulungisa ukutya kunye nakwimigca yemveliso yoshishino.